Trends 2019: Iyo Inonyanya Kuzivikanwa Zvirongwa Mitauro | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifarira kugadzirisa mamiriro ako ekushanda, kana uchida kuziva chii programming languages Iwe unofanirwa kudzidza kuwana basa, tiri kuzokuratidza mafambiro egore idzva 2019 ratakatangisa. Gore rega rega zvimiro zvinowanzo shanduka muchikamu, kunyange mimwe mitauro ichiramba yakagadzikana gore rimwe nerimwe nekuda kwekukosha kwayo. Nekudaro, tekinoroji iri kuchinja zvakanyanya uye zvinoenderana nezvinodiwa panogona kuve nezvimwe zvinokwira muchinhanho kana kuti mitauro mitsva inosvika ...
Pano tinokuratidza rondedzero yemitauro yekuronga iyo ichave ichifambisa iyi 2019. Imwe nguva yapfuura isu takaburitsawo yakafanana chinyorwa pane ino blog, uye ikozvino isu tinogadziridza ruzivo urwu zvakare. Kana iwe uchirangarira icho chinyorwa, mumwe wemitauro watakakurudzira kudzidza waive Ruby weROR, sezvo paive nezvakawanda zvaidiwa kubva kune nyanzvi panguva iyoyo yemutauro uyu. Kana iwe uchida kuziva kuti ndechipi chakanyanya kudikanwa izvozvi, ndinokukurudzira kuti urambe uchiverenga:
Python: Ndiwo mutauro usinganetsi kudzidza, mutauro wakanaka uye une mashandiro anogamuchirwa kana tichifunga kuti unodudzirwa. Hupfava hwayo uye zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa nayo nekuda kwekuchinjika kwayo, vakaiisa yakakwira kwazvo muchinzvimbo. Kune mapurojekiti akanyorwa muPython yemarudzi ese, kubva kumaturusi ekuchengetedza, kune mamwe mathematics, zvinoshandiswa zvemarudzi ese, nezvimwe.
Java: Mumwe mutauro wakave wakakurumbira nekubvumidza zvikumbiro zvakanyorwa nawo kuti zviitwe muchinjika-chikuva, sezvo isiri yepuratifomu inoenderana, zvinongoshandisa iyo Java Virtual Machine (JVM) pakuitwa kwayo. Uye zvakare, Android ine maapplication akanyorwa mumutauro uno, saka kana iwe uchifunga nezvekunyora maapplication emafoni nhare, Java ndiyo sarudzo huru yekudzidza.
C#: inotevera muchinzvimbo ndeiyi mutauro unokunakidza kunyanya kana ukaronga kushanda nemapuratifomu eMicrosoft.
C uye C ++: C mutauro une simba kwazvo, une mashandiro akanaka uye, nekuda kwehunhu hwayo, unonzi mutauro wepakati-soro, nekuti inobvumidza zvirongwa padanho repamusoro, uye zvakare inoshanda nezvimwe zvakaderera-chikamu maficha. Izvi zvinoita kuti zvinyanye kunakidza mukugadzira yakakwira-kuita kana kwesainzi kunyorera, uye neanoshanda masystem. Muchokwadi, mazhinji eazvino masisitimu anoshanda akagadzirwa nemutauro uyu, kunyanya iwo UNIX iwo (iyo Linux ernel muenzaniso). Kana iri C ++, iko kushanduka kwechinhu chakanangana neC icho icho parizvino chine kuwanda kwekushandisa uye chakakwanisa kuisa kumusoro muchinzvimbo.
Zvimwe: kunze kweizvi, isu tinogona zvakare kutarisa mimwe mitauro yakakosha zvakanyanya uye iri kudiwa kukuru.
Somuenzaniso Bhash kunyora, sezvo iri muturikiri wemirairo unoshandiswa zvakanyanya muLinux uye mamwe maUNIX-senge masisitimu aripo mumichina yakawanda senge maseva, mainframes uye supercomputer. Zvingave zvinonakidza kune yako manejimendi kusangana newe ...
SwiftNdiwo mutauro uri kubuda, iwe unotoziva kuti wakagadzirwa neApple uye kuti urikushandiswa zvakanyanya kugadzira mapurogiramu matsva emapuratifomu ayo (Mac uye iOS) kutsiva Chinangwa-C.
HTML5, CSS, PHP, pasina mubvunzo pfungwa nhatu dzinonakidza dzekudzidza nezvewebhu renyika.
Ruby uye chimiro Ruby paRails (RoR), tinoitumidza zita nekuti inonakidza kwazvo.
Go, uyu mutauro unouya kubva paruoko rweGoogle, uye kuti iwe unofanirwa kuziva zvakare.
ngura inouya kubva paruoko rweMozilla, uye haisi imwe nzira yakaipa yekudzidza ...
Elixir, Mumwe mutauro wakaonekwa muna 2011, uye kunyangwe usinga nyatso zivikanwa, unonakidza uye wakawana mukurumbira munguva pfupi yapfuura munyika yevagadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Trends 2019: inonyanya kuzivikanwa mitauro mitauro
Manuel Otzoy akadaro
Ini ndinoshamisika kuti nei zvichinetsa kuwana IDE yakanaka yekuvandudza mumitauro iyi, makore apfuura ini ndakarongedzwa muVisual Basic uye Visual FoxPro uye zvese zvainakidza kushanda nazvo. Ini pamwe ndakanganisa kana ndabuda muchinyakare, zvakadaro kana iwe ukakwanisa kunyora chimwe chinhu nezvazvo ndinokutenda.
Pindura Manuel Otzoy